ARTUZ Yookurudzira Nhengo Dzayo Kupfeka Zvitsvuku Mangwana Vachiratidzira Kuhurumende.
Nhengo dzesangano re Amalgamated Rural Teachers’ Union of Zimbabwe, dziri kukurudzirwa kuti dzipfeke nguwo tsvuku mangwana senzira yekutsigira chirongwa chesangano iri che “Red Friday Rage” icho chakanangana nekuudza hurumende kuti varairidzi havasi kufara nemari yakawedzerwa nehurumende nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana.
Vadzidzisi ava vanoti vacharatidzira murunyararo mangwana nyika yose vakapfeka zvitsvuku semucherechedzo unoshandiswa nemushandi wepasi rose muhondo yavo yekuti vawane kurarama kwakanaka. Danho iri rinotevera kusawirirana kuripo pakati pevarairidzi nehurumende panyaya dzemihoro.
Mutevedzeri wa sachigaro we sangano iri, muzvare Gaudencia Mandiopa vanoti huronmgwa hwamangwana hauneyi nekuita nezvematongerwo enyika sekufungidzira kunoita vamwe asi kuti idanho rekurwira kodzero dzavo sevadzidzisi.
Muzvare Mandiopa vati havafariri kuramba vachipindirwa munyay dzavo se vadzidzisi ne sangano re APEX iro ronomiririra vashandi vese vehurumende asi ARTUZ ichiti rinomiririra zvido zve hurumende, kwete zvevashandi. Vatiwo kuratidzira kwamangwana kuri kubata nyika yese uye mamwewo masangano anomiririra vadzidzisi ari kubatana pamwechete navo muchuiitiko ichi.
Hurukuro naGaudencia Mandiopa